Madagasikara: Kianin’Ireo Mpitoraka Bilaogy Malagasy Any Frantsa Ilay Politikan’i Sarkozy Momba Ny Fifindràmonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2018 7:57 GMT
Ny famoronana minisitera iray misahana ny fifindràmonina sy ny maha-olom-pirenena no fandaharanasa iray izay heverin'ny filoha frantsay vaovao, Nicolas Sarkozy. Tsy maintsy manaiky io fomba fiasa hentitra io, ary manaporofo ny fifatorany amin'i Frantsa ireo mpifindramonina izay miaina ao Frantsa efa an-taonany maro, mba hahazoany ny fahazoandàlana hijanona ho olom-pirenena frantsay. Nampiady hevitra ireo mpitoraka bilaogy malagasy monina any Frantsa ireo lalàna vaovao vaovao ireo, miaraka amin'ny fahadisoam-panantenana sy esoeso madinika. Namoaka lahatsoratra iray manazava ny fandikany ireo fepetra vaovao ireo i Tattum. Ao amin'ny sehatra fanehoankevitra, nahazoana valiny sy fomba fijery avy amin'ny mpitoraka bilaogy hafa ilay lahatsorany.
Mamoaka lahatsoratra vazivazy amin'ny teny malagasy momba ny governemanta frantsay tena matanjaka sy momba an'i Sarkozy, izay antsoiny hoe “petit corps malade » (vatana kely marary) i Harinjaka.